သူမသည် အပျိုစစ်စစ် ဖြစ်ကြောင်း မမဆောင်း ဗီဒီယိုဖိုင် ဒဲ့ချပြရှင်းပြီ – Cele Oscar
ဗီဒီယို ဇာတ်ကား တွေ နဲ့ VCD အခွေ များ တွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့ရာမှ တဆင့် ပရိသတ် တွေ ရဲ့ အသိအမှတ် ပြု လက်ခံ အားပေး မှု တွေကို ရရှိခဲ့ သူက တော့ သ ရုပ် ဆောင် မင်းသမီး ချောလေး ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … ။သူမ ဟာ အနုပညာ လောက တွင် ဆယ်စု နှစ် နှစ်စုတိုင် အောင်ကို လူ အများရဲ့ ချစ်ခင် မှုတွေ ရရှိခဲ့တာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် … ။ မမဆောင်း ရဲ့ တမူ ထူးခြား တဲ့ အပြော လေးတွေ ကြောင့် လည်း ယောကျာ်း လေး ပရိသတ် တွေ က ကြွေနေကြ ရတာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် … ။
မမဆောင်း ဟာ သူ့ အထာ နဲ့ သူ ဆန်းသစ် တဲ့ ပုံစံ တွေ နဲ့ ဆိုရှယ် မီဒီယာ ပေါ် တွင် ရေပန်းစား အောင် လုပ်နိုင် သူ တစ်ဦး လည်း ဖြစ်ပါ တယ် … ။ စကား ပြောပုံ ဆိုပုံလေး တွေ နဲ့ ဟန်ပန်အမူ အရာ လေးတွေ က လည်း အများ နဲ့ မတူဘဲ ကွဲပြား ခြားနား စွာ တင်ဆက် နိုင် တဲ့ သူမ ရဲ့ အနုပညာ စွမ်းအားတွေ ကြောင့် ပရိသတ် တွေ က မမဆောင်း မှ မမဆောင်း ဖြစ်နေ ကြရ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် … ။လတ်တ လော မှာတော့ မမဆောင်း တစ် ယောက် ကြော်ငြာ လေး တွေ လက် မလည် ရ အောင် ရိုက် ကူး နေရ တာလည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။ အနု ပညာ လှုပ်ရှားမှု တွေ ရှိတိုင်း ပရိသတ် တွေကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ တင်ပေး နေ တာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် … .
မကြာ သေးခင် နာရီပိုင်း လောက် ကလည်း မမဆောင်း ရဲ့ လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ မှာ Live Video လေး တစ်ခု တင် ထားတာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ ဒါ က တော့ သူမရဲ့ ဝင်းမွတ် ဖြူဖွေး တဲ့ အလှ တရားတွေ ပေါ် သွားမှာ စိုးတဲ့ အတွက် ရင်ပြတ် အကျီ လေးအား အပေါ် သို့ ဆွဲဆွဲ တင်နေတဲ့ မမဆောင်း ရဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်လေးပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … ။ မမဆောင်း က တော့ သူမ ရဲ့ အိမ်တွက် ဓာတ်ပုံ ရိုက်ရန် မိတ်ကပ် ပြင် နေစဉ် Live လွှင့် ခဲ့တာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … ။ပရိသတ် တွေ လည်း ကြည့်ရှု ခံစား နိုင်အောင် ဒီဗီဒီယို ဖိုင်လေး ကို တစ်ဆင့် ပြန် လည် ကူးယူ တင်ဆက် ပေးလိုက် ရပါ တယ် နော် … .
source and photo crd : Saung Eindaray Tun ’ s facebook account
ဗီဒီယို ဇာတျကား တှေ နဲ့ VCD အခှေ မြား တှငျ ပါဝငျ သရုပျဆောငျ ခဲ့ရာမှ တဆငျ့ ပရိသတျ တှေ ရဲ့ အသိအမှတျ ပွု လကျခံ အားပေး မှု တှကေို ရရှိခဲ့ သူက တော့ သ ရုပျ ဆောငျ မငျးသမီး ခြောလေး ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျး ပဲ ဖွဈ ပါ တယျ … ။သူမ ဟာ အနုပညာ လောက တှငျ ဆယျစု နှဈ နှဈစုတိုငျ အောငျကို လူ အမြားရဲ့ ခဈြခငျ မှုတှေ ရရှိခဲ့တာ လညျး ဖွဈပါ တယျ … ။ မမဆောငျး ရဲ့ တမူ ထူးခွား တဲ့ အပွော လေးတှေ ကွောငျ့ လညျး ယောကျြား လေး ပရိသတျ တှေ က ကွှနေကွေ ရတာ လညျး ဖွဈ ပါ တယျ … ။
မမဆောငျး ဟာ သူ့ အထာ နဲ့ သူ ဆနျးသဈ တဲ့ ပုံစံ တှေ နဲ့ ဆိုရှယျ မီဒီယာ ပျေါ တှငျ ရပေနျးစား အောငျ လုပျနိုငျ သူ တဈဦး လညျး ဖွဈပါ တယျ … ။ စကား ပွောပုံ ဆိုပုံလေး တှေ နဲ့ ဟနျပနျအမူ အရာ လေးတှေ က လညျး အမြား နဲ့ မတူဘဲ ကှဲပွား ခွားနား စှာ တငျဆကျ နိုငျ တဲ့ သူမ ရဲ့ အနုပညာ စှမျးအားတှေ ကွောငျ့ ပရိသတျ တှေ က မမဆောငျး မှ မမဆောငျး ဖွဈနေ ကွရ တာပဲ ဖွဈပါ တယျ … ။လတျတ လော မှာတော့ မမဆောငျး တဈ ယောကျ ကွျောငွာ လေး တှေ လကျ မလညျ ရ အောငျ ရိုကျ ကူး နရေ တာလညျး ဖွဈပါ တယျ..။ အနု ပညာ လှုပျရှားမှု တှေ ရှိတိုငျး ပရိသတျ တှကေို အခြိနျနဲ့ တဈပွေးညီ တငျပေး နေ တာ လညျး ဖွဈ ပါ တယျ … .
မကွာ သေးခငျ နာရီပိုငျး လောကျ ကလညျး မမဆောငျး ရဲ့ လူမှု ကှနျယကျ စာမကျြနှာ မှာ Live Video လေး တဈခု တငျ ထားတာ ပဲ ဖွဈပါ တယျ..။ ဒါ က တော့ သူမရဲ့ ဝငျးမှတျ ဖွူဖှေး တဲ့ အလှ တရားတှေ ပျေါ သှားမှာ စိုးတဲ့ အတှကျ ရငျပွတျ အကြီ လေးအား အပျေါ သို့ ဆှဲဆှဲ တငျနတေဲ့ မမဆောငျး ရဲ့ ဗီဒီယို ဖိုငျလေးပဲ ဖွဈ ပါ တယျ … ။ မမဆောငျး က တော့ သူမ ရဲ့ အိမျတှကျ ဓာတျပုံ ရိုကျရနျ မိတျကပျ ပွငျ နစေဉျ Live လှငျ့ ခဲ့တာပဲ ဖွဈ ပါ တယျ … ။ပရိသတျ တှေ လညျး ကွညျ့ရှု ခံစား နိုငျအောငျ ဒီဗီဒီယို ဖိုငျလေး ကို တဈဆငျ့ ပွနျ လညျ ကူးယူ တငျဆကျ ပေးလိုကျ ရပါ တယျ နျော … .